Dr. Abiy akka Oromoon hin filanne beeke. Garuu kan nama gaddisiisu Oromoon akka isa filattuuf Oromoof waa godhuu dhiisee karaa aangoo irra turu qofa irratti xiyyeeffatuu isaati. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDr. Abiy akka Oromoon hin filanne beeke. Garuu kan nama gaddisiisu Oromoon akka isa filattuuf Oromoof waa godhuu dhiisee karaa aangoo irra turu qofa irratti xiyyeeffatuu isaati.